Olee otu esi ejikwa nlekọta weebụ na SEO n'ụzọ kasị mma?
Mgbe ntanetị weebụ gị na-aga n'ihu na-ekwusakwu ihe banyere okporo ụzọ dịka ike nke locomotive, ị kwesịrị ịtụle mkpirikpi nkenke. Ekwenyere m na ọ bụla mgbasa ozi ntanetị mgbasa ozi ga-adabere mgbe niile na ọganihu Web na SEO, ma aka abụọ dị n'aka. Ka anyị chee ya ihu - Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta bụ ihe ndị ọzọ banyere nchọpụta isiokwu, kwadoro usoro atụmatụ ahia dị mma. Ma, e nwere ọtụtụ akụkụ ọrụ uzu dị iche iche na-abịakarị n'azụ ọnọdụ ahụ. Ma karịsịa nsogbu ndị ahụ na-achọpụta na ọ bụla ibe weebụ na ndepụta nke SERPs. M na-ekwu na mgbe ị na-eme SEO gị, ị ga-enyocha mgbe niile usoro ziri ezi maka koodu ọ bụla nke gị, site na mmalite.
Nabatara maka ntuziaka
Ihe mbụ a ga-eme maka ibe weebụ, na mmepe SEO, bụ ijide n'aka ngalaba ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ gị dịkarịa ala ịnwetanwu maka ntinye akwụkwọ, ekwuru m na ọ dịghị ihe ọ bụla ga-egbochi robots crawling site na "ịgụ" akụkụ ọ bụla nke data data gị. Na-eme nke a, ana m akwado iji iwu "Fetch" na ngalaba Crawl nke Google Search Console iji lelee anya mbụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị, site na echiche nke engines ọchụchọ. Enwere naanị otu isi ihe a - gbalịa idebe ihe niile na HTML, naanị zere iji Flash ma ọ bụ Silverlight maka ibe weebụ gị dị mkpa. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma, na ebe nrụọrụ weebụ gị dịkarịa ala ọ ga-adị mfe, n'okpuru ị ga-ahụ ntụziaka dị mkpirikpi maka ịmatakwu ahụmịhe onye ọrụ, yana ọkwa dị elu nke ga-enye ndị engines ọchụchọ.
Nwere URL ndị dị ọcha
URL ibe gị bụ URL ndị dị mkpa, ma banyere mmepe Web na SEO, na maka ahụmịhe ọkachamara. Mee ka URL gị dị mfe dị ka o kwere mee ka 'ndị ọhụụ' ghọtara ya, yana ịgụ ya site n'aka ezigbo ndị ọrụ. Kpochapụ data URL ọ bụla na-enweghị isi, nke nwere ike ime ka ọgba aghara ma ọ bụ Google n'onwe ya ma ọ bụ ndị na-eleta ibe weebụ gị. Site n'otu aka, inwe enweghị njikarịcha maka URL gị ga-eme ka ndị mmadụ ghara ịpị pịa, ọ bụghị ikwu ya. N'otu oge ahụ, engines ọchụchọ nwere ike ịpụta ihu ụfọdụ nsogbu mgbe "nghọta" ya dị mkpa na otu isiokwu.
Ịtụle ibe weebụ kwesịrị ekwesị na mmepe SEO, nweta URL gị kachasị mma site na paragraf ndị a:
page URL kwesịrị ịdị mkpụmkpụ ma na-enye nkọwa dị ka o kwere mee. Enwere m ike itinye aka na URL gị yana naanị mkpụrụokwu ma ọ bụ ahịrịokwu dị mkpa ma dị mkpa, iji dabara na isiokwu gị na ebe nrụọrụ weebụ.
Adịghị enwe URL gị na isiokwu ndị ahụ, debe ụzọ maka ịkọwapụta dị ka o kwere mee. N'ịme nke a, cheta na ịhapụ okwu nkwụsị na ọnụahịa niile (dị ka ihe na-emekarị: "nke," "nke," "na," "a," wdg.)
Na-eji hyphens mee ihe iji kewaa usoro okwu na URL gị. Echefula banyere ala, dịka ndị na-eme nnyocha na-aghọtaghị ha. Nke ahụ na-eweta ụfọdụ ihe isi ike dị ike maka ịgba na ntinye aha.
Nọgide na-edebe okwu ahịrịokwu ziri ezi site na itinye isiokwu gị dị mkpa dị ka mmalite nke URL ọ bụla. Cheta, na dị ka echiche ha si dị, ndị ọrụ blọọtọ nyocha na-elekwasị anya na ndị ahụ ga - abụ mkpụrụ edemede edemede.
Site n'ụzọ, a ga-enwe ihe ọzọ mere ị ga-eji mee ka URL gị dị mkpirikpi ka o kwere mee, m. e. , ịnọgide na-enwe ma na-amụba ibu arọ nke isiokwu gị na URLs. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, weghachite URL gị dịka ọ dị, dịka a ga - asị na ha bụ ihe dị iche iche nke ederede gị. Ime otú ahụ, ị ​​ga-enweta ihe ọ bụla spam ma ọ bụ obere nsogbu ọdịnaya nsogbu ka ọ dịkarịa ala Source .